Boqorka Beelaha Daarood oo waan -waan ka dhax-bilaabay Dowladda iyo qaar ka mid ah Siyaasiinta Mucaaradka? – War La Helaa Talo La Helaa
By Nuurka Nuurka	 On Jan 10, 2018
Warar ay heshay Warbaahinta ayaa sheegaya in Boqor Burhaan Boqor Muuse Boqor Yuusuf oo ah Boqorka Beelaha Daarood uu bilaabay kulamo wax looga qabanayo Khilaafka u dhaxeeya Madaxda Dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah siyaasiinta Mucaaradka ah.
Mas’uuliyiin ka ag-dhaw labada dhinaca ayaa Warbaahinta u sheegay in Boqor Burhaan uu Telephone kula hadlay Senator Cumar C/rashiid Ra’iisal Wasaarihii ee Soomaaliya wadahadalkaasi oo lay sugu soo noq noqday muddo Labo maalmood ah sida ay sheegeen ilo lagu kalsoon yahay.
Xogta ay heshay Warbaahinta ayaa sidoo kale sheegaysa in Culumaa’udiin Taageersan Dowladda Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ay Boqorka ka dalbadayn in uu yimaado Muqdisho, waxaana kadib la filaya in la Iclaamiyo kulan ay u dhan yihiin dhamaan Waxgaradka Soomaaliyeed.
Afar Waxyaabood Oo Sababa Musuq Maasuqa (CORRUPTION)